OnePlus အသုံးပြုသူများသည်ကုမ္ပဏီကိုဆန့်ကျင်သောလက်မှတ်များကိုစုဆောင်းသည် Androidsis
OnePlus အသုံးပြုသူများသည် Project Treble ၏မရှိခြင်းအတွက်လက်မှတ်များကိုစုဆောင်းသည်
La OnePlus 5T ကိုစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိခြင်းသည်အနည်းငယ်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ High-end အသစ်ဖြစ်ကတည်းကတစ်ပါတ်အကြာတွင်ဖြစ်သည် တရားဝင်တင်ဆက်သည်။ ၎င်း၏နှင့်အတူဒီဇိုင်း ခဲမဆို frames များကိုအတူမျက်နှာပြင် ကိရိယာကမ်းလှမ်းသောအဓိကပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ လူအများစုမထင်သောအပြောင်းအလဲသည်လုံလောက်သည် သို့သော်များစွာသောသူတို့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောနောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်တစ်ခုရှိသေးသည်
La ကိရိယာတွင် Android Oreo မလုပ်ရန် OnePlus ဆုံးဖြတ်ချက်။ များစွာသောသူတို့သည်ရှင်းပြရန်ကြိုးစားနေကြသည့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့အားသင့်စရာတစ်ခု။ ယခုနှစ်အကုန်တွင်ရောက်ရှိလာသောနောက်ဆုံးပေါ် operating system ဗားရှင်းမရှိဘဲ high-end သည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, OnePlus အသုံးပြုသူများသည်စီးပွားရေးမှဆင်းလာသည်.
အ သုံးစွဲသူများသည်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမနှစ်သက်ပါ။ OnePlus အမှုအရာကောင်းစွာပြုတော်မမူကြောင်းသူတို့သိကြ၏ ဒါ့အပြင်ဖုန်းကိုအတည်ပြုချက် သူတို့က Project Treble ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး ဒါဟာနောက်ဆုံးကောက်ရိုးပဲ။ အဓိကအားဖြင့်တော့ Android မှာ fragmentation ကိုရပ်တန့်ဖို့လိုလို့ပဲ။
ကျေးဇူးတင် Project Treble updates များသည် devices အားလုံးအားလုံးအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူတယ်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောမွမ်းမံမှုအကြိမ်ရေကိုလည်းခံစားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်၏ဆုံးဖြတ်ချက် OnePlus ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ် သုံးစွဲသူများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောအရာ။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်စတင်ခဲ့သည် လက်မှတ်ပေါင်းစုဆောင်း.
El သင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် OnePlus ကိုတုံ့ပြန်ရန်နှင့်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့နောက်ဆုံးတော့ထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် စီမံကိန်းထရီဘယ်လ် သူတို့ရဲ့ဖုန်းများပေါ်တွင်။ အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးပေါ်အရာများဖြစ်သော OnePlus 5T ။ ဒါကြောင့်စားသုံးသူအလွန်ဖြစ်ကြောင်းပုံရသည် ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အတူအမျက်ထွက် ကုမ္ပဏီ၏။ ယခုအချိန်အထိသူ့ထံမှမည်သည့်တုန့်ပြန်မှုမျှမရှိပါ။
အဆိုပါအသနားခံစာမှတဆင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် change.org. ရည်ရွယ်ချက်မှာလက်မှတ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ရရှိရန်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်သူတို့က 1.600 ကျော်လွန်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ကြာမြင့်စွာမယူပါလိမ့်မယ်။ OnePlus အသုံးပြုသူများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသင်မည်သို့ထင်သနည်း။ သူတို့ကုမ္ပဏီကိုစိတ်ပြောင်းဖို့လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » OnePlus အသုံးပြုသူများသည် Project Treble ၏မရှိခြင်းအတွက်လက်မှတ်များကိုစုဆောင်းသည်
Android Oreo ကို Nokia 8 တွင်တရားဝင်ရောင်းချ